iPhone X: New Apple Smartphones iindawo zokulahla iqhosha Home for Screen-All Design - News umthetho
iPhone X: New Apple Smartphones iindawo zokulahla iqhosha Home for Screen-All Design
imodeli entsha 3 Novemba umhla ukukhululwa uthembisa iikhamera ngcono, ukubonwa kobuso, emojis animated, ubomi bebhetri elide kunye Ukuhlasela wireless
Eli nqaku obizwa “iPhone X: entsha Apple smart iinkunkuma iqhosha ikhaya kuyilo bonke-screen” yabhalwa ngu uSamuweli Gibbs, ngokuba theguardian.com ngoLwesibili 12 Septemba 2017 18.57 i-UTC
Apple uye sityhile iPhone X, smart layo entsha ngokupheleleyo ngokutsha ukuba ilahla yemveli iqhosha home ukuba uyilo bonke-screen, kwakunye ne iPhone entsha 8 no iPhone 8 Plus models.
vice mongameli Apple kaThixo aphezulu lorhwebo lonke, Phil Schiller, wathatha ukuba ibakala yenkampani entsha Steve Jobs Theatre emi phakathi brand new Apple Park "Isiphekepheke" wonke ukuze kutyhila i iPhones ezintsha.
i entsha $999 (£ 999 - kukho dollar-to-phawundi ubo kwi kuluhlu entsha iimveliso Apple) iPhone X uya kuza iOS ezintsha yenkampani 11 software ufake amaqhosha ezintsha kwi-screen nezijekulo endaweni ngomgangatho emzimbeni iqhosha ekhaya, leyo kuye kwaba undoqo iPhones ukususela sungula umgca xa 2007, plus emoji entsha noopopayi ebizwa Animoji.
I iPhone X, zicaca 10, ziya kuza imibala ezimbini, grey space nesiliva, kwaye luyafumaneka pre-phezu 27 EyeDwarha, kanye lokuthumela ngu 3 EyeNkanga. Kwakhona A 256GB ukhetho yokugcina iya kufumaneka ukuze £ 1.149.
Apple elilawulayo eliyintloko Tim Cook uthe: "Yiyo le iPhone X. Yeyona ingxenye enkulu phambili ukususela yokuqala i-iPhone. "
Endaweni yokuba ukucinezela iqhosha, abasebenzisi baswayipha up ukusuka ezantsi ukuya ukuya ekhaya screen kunye isusa kwaye ubambe ukuya ezininzi. Ukuze Ukuvusa abasebenzisi isixhobo ucofe nje ikhusi okanye aphakamise iPhone, ngexesha iziko ulawulo ngoku zingafumaneka ngokuthi ku- phantsi isuka kwikona ephezulu ngasekunene ifowuni.
I-iPhone X inalo screen entsha oled. Thatha: Justin Sullivan / Getty Images
Umphambili ifowuni features ofunda kwi phezulu entsha oled Super Iretina uboniso yezindlu inkqubo entsha Yinyaniso Ubunzulu ikhamera Face ID inkqubo ukubonwa kobuso kunye nokuthatha wedwa Mode Umfanekiso Apple ukuba. Apple uthi Face ID ikwazi ukuchonga umnini ifowuni ukususela 3D scan ebusweni ukuze ukuvula ifowuni, Iintlawulo ukuqinisekiswa kunye igalelo basindiswe passwords zibe screens ukungena kwakunye nokuzibuyisela apps zomntu wesithathu.
iinkqubo ezifanayo aye asetyenziswa Microsoft ngenxa yayo Windows Hello-ikwazi line computer Surface, kodwa akukho namnye kodwa waba ubuchwepheshe efowuni. Apple uthe le nkqubo ikwazi yokusebenza naxa umsebenzisi wayenxibe iiglasi, kwaye Sivula kuphela ifowuni xa umsebenzisi-nxada ukhangelana kuyo.
I-iPhone X ayibandakanyi Touch ID fingerprint scanner Apple ukuba, leyo olwaqalwa 2013 phantsi ekhaya iqhosha kunye iPhone 5.
Kodwa Apple wathi Face ID baso ekhuselekileyo ngaphezu Touch ID ngokuphindwe 20, okuphicotha phakathi ubuso lomsebenzisi lokwenyani kunye neefoto - yaye Hollywood-level sikhombisa ifane - ngokusebenzisa inkqubo Ubunzulu ikhamera True, zeziphi iiprojekthi imaphu IR dot kwi ebusweni kwimaphu kuyo. It isebenze ebumnyameni.
Ngasemva iPhone X iglasi. Thatha: Justin Sullivan / Getty Images
Ezinye ifowuni yenziwa steel stainless kunye negilasi, harking emva kuyilo iPhone 4, kwaye zibonise ukuba imbangi Samsung kaThixo Galaxy S8 kodwa ngaphandle screen egobile. It amanqaku umahluko omkhulu kuzo kutshanje bonke-metal imifuziselo iPhone, kunye iintsalela ukuze kubonwe ukuba uphethwe kwinqanaba efanayo ubu njengoko eyimbangi zeglasi-and-metal Smartphones isangweji. Apple uthe iglasi yaba eside kakhulu wakha ifakwe ku efowuni nge unyanzeliso metal. Le jack yoLungiso sisasetyenziswayo azisekho.
I-iPhone X iya kuba iprosesa zakutshanje Apple ukuba, i A11 obulawulwa ukuba luza ezihlangeneyo UPetitto ngenjini ukuqondwa ubuso kwaye ngoku umphakathi ezintandathu, phezulu ukusuka ophelileyo nyaka A10 kunye umphakathi ezine. Apple wathi A11 waba 30% ngokukhawuleza yemizobo yaba ukuya ku 70% iprosesa ngokukhawuleza ngaphezu A10, ngexesha ukwandisa ubomi bebhetri ngu iiyure ezimbini phezu iPhone 7 - kwindawo iintlungu uninzi abasebenzisi iPhone yangoku.
Apple bakwaziswa womserbia wireless Qi ukuya kumgca iPhone okokuqala, esebenzisa ipleyiti phakathi emva ifowuni ukwamkela intlawuliso ezenza elisuka kwikhadi okanye isijungqe ifanitshala kunye womserbia wireless kwakhiwa. Yinto isici Sekudlule umgangatho Galaxy S line Samsung kaThixo Smartphones ngenxa wokugqibela Ntathu iminyaka kwaye ziyafumaneka nabanye angi eziliqela, yaye kususa imfuno yokuba ulinde kunye intambo kwamacala smart.
Ngasemva iPhone X inkqubo camera ezimbini Apple ngoku eziqhelekileyo, leyo wangenela 2016'S iPhone 7 Plus omnye ububanzi-engile yekhamera, omnye "iTelephoto" ikhamera zikwazi ukunikeza ifowuni amaxesha ezimbini optical zoom, kodwa phezulu ukuya ezantsi kunokuba tye. Zombini iikhamera babe abenzi boluvo ezintsha megapixel-12, umfanekiso sinjalo okubonakalayo kunye Apple wathi ukuba iphucuke inkqubo yayo azo iifoto ukuvelisa ngcono, imifanekiso ezichanisekileyo.
Inxalenye yale nkqubo oluphuculweyo inguqulo entsha ye Indlela Portrait yenkampani, leyo evumela abasebenzisi ukuba kweso artificially imvelaphi ukudala kubunzulu kuyaphi befildi, efana naleyo adalwe iikhamera dSLR, kwaye utshintshe i neziphumo ndikhanyise lonke ubuso isifundo ngayo. Angi Samsung nabanye baye ngenqanawa iimpawu ezifanayo, kunye iziphako obekwayo malunga iinkcukacha ngokupheleleyo ezifana noboya. Kuhleli ukuba kubonwe ukuba ngaba inkqubo Apple kunokuba ukulungisa ezo ngxaki.
Apple naye nje obubhenqwe isigqubuthelo oonobumba ezintsha emoji noopopayi ithi "animoji", evumela abasebenzisi kwimaphu yobuso kwi kubalinganiswa kancinane, ezifana irobhothi, mpungutye, Inyathi, okanye ichama anthropomorphised ngokusebenzisa inkqubo ukubonwa kobuso iPhone X kaThixo. Le animoji inokuthunyelwa kuphela kwabanye abasebenzisi Apple nge yenkampani Imiyalezo app.
ben Wood, intloko uphando CC Insight wathi: "I-iPhone X njengesicwangiso ulwalathiso olutsha zekhompyutha i iPhone xa. Mephu yoboniso oled kunye uyilo omtsha kungenzeka ukuba [ibe] eqhelekileyo kwimodels iPhone elizayo, kodwa Apple kuqala kufuneka siwuqwalasele mngeni yokufumana unikezelo ngokwaneleyo.
"A uvalo Ukufakelwa kobuchwepheshe oled kunye noyilo entsha yenza Apple ukuba kummango ngokuthe chu ukuya isikali supply chain kwaye yandisa yayo ingeniso. Amaxabiso aphezulu ngokwentelekiso iPhone X na indlela kuyimfuneko yaye kubalulekile imfuno ulawulo kwikota kufuphi. "
i iPhone 8, leyo iya kuqala kwi $ 699 / £ 699. Thatha: Stephen Lam / Reuters
Ecaleni kwe iPhone X, Apple naye nje obubhenqwe isigqubuthelo nezinye Smartphones ezintsha ezimbini, i iPhone 8 yaye 8 Plus, ezo ngocoselelo kuhlaziywa ze 2016'S iPhone 7 yaye 7 Plus, ezibe ngokwabo ihlaziya le iPhone 6 yaye iPhone 6 imigca 2014 yaye 2015 ngokulandelana.
Ngaphandle i iPhone 8 yaye 8 Plus has iglasi ngaphambili nangasemva, nge eyahlukileyo umbala-afane aluminiyam band emhlabeni ngaphandle. Apple wathi kwiglasi kwi ngasemva yaba "abaninzi iglasi elide na efowuni", uzama kulunqande uloyiko ukuba iPhone entsha kuba ngaphantsi eside iPhone 7.
i iPhone 8 yaye 8 Plus sobabini A11 obulawulwa chip entsha Apple ukuba, kodwa ngaphandle UPetitto wenjini ukuba zifakwa kwi-iPhone X, kwaye beze screens yaphando yenkampani True Ithoni uphawu kwaye izithethi eziphuculweyo ngexesha ukugcina ifomu yalo omiyo iqhosha ekhaya Touch ID 2 zeminwe scanner. Kodwa abanakho ukubonwa kobuso kunye uyilo lonke-screen of the iPhone X.
Schiller uthe: "Lo iPhone lokuqala esidalelwe AR. Le khamera ngabanye lihlelwe kwi mveliso eyenza umahluko omkhulu AR, kunye neenzuzo AR ukusuka A11 obulawulwa chip entsha. "
Apple Kwakhona wongezelela Qi zintambo ezibiza efana iPhone X kunye Bluetooth latest 5.0 standard, apho kulindeleke ukuba isetyenziswe ngokubanzi kunyaka ozayo headphones kunye nezinye peripherals.
i iPhone 8 yaye 8 Plus abaya kuza imibala ezintathu uqale kwi $ 699 / £ 699 kunye $ 799 / £ 799 ngokulandelelana kunye 64GB yokugcina, ekhoyo pre-oda 15 Septemba nokuhambisa ngu 22 EyoMsintsi. A 256GB ukhetho yokubeka lukhona.
Wood uthe: "I-iPhone X kunye iPhone 8 models ukongezwa kakhulu kwipotifoliyo Apple ukuba idilesi ukwandisa ukhuphiswano evela Samsung nabanye. Ezinamandla ziya ukubukela indlela ngokukhawuleza Apple unokuyixela le iPhone X iqale ukwakha ecaleni kwi design entsha ezinamacandelo ezintsha. "
← Roomba Maker May Share Maps of Abasebenzisi’ Amakhaya ne Google, Amazon okanye Apple Google Ekhaya Mini Review: Voice Assistant Somlomo →